Khubarada hubka kiimikada oo walxa ay u adeegsan doonaan baaritaankooda dalka Suuriya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaKhubarada hubka kiimikada oo walxa ay u adeegsan doonaan baaritaankooda dalka Suuriya
Khubarada hubka kiimikada oo walxa ay u adeegsan doonaan baaritaankooda dalka Suuriya
Hiiraan Xog, Apr 22, 2018:- Laba toddobaad kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in dowladda Suuriya ay adeegsatay hubka kiimikada ayaa khubarada caalamiga ee ku takhasuusay baaritaanada hubka kiimikada waxaa ay gaareen magaaladii ay heysteen mucaaradka ee Douma.
Hey’adda OPCW waxaa ay sheegtay in khubaradooda ay soo uruuriyeen walxa ay ku baari doonaan sheybaaradooda. Madaxda hey’addaasi ayaa waxaa kale oo ay shegeen in laga yaabo inay dib ogu laabtaan goobaha la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada.
Khubaradan ayaa dhowr jeer oo hore laga baajiyay inay tagaan halka uu weerarka ka dhacay sababa la xiriira amnigooda.
Saraakiisha reer galbeedka ayaa iyaguna ka cabsi qaba in caddaymaha muujinaya hubka kiimikaad ee la tuhunsanyahay in halkaa lagu garaacay la baabiiyey kahor inta aanay baarayaasha gaarin halkaasi.
Dowladda Suuriya iyo Ruushka oo taageero ayaa horay u beeniyay inay qaadeen weerar kiimika ah, taasi oo sababtay in Mareykanka, Fransiiska iyo Britain ay duqeeyaan goobo la sheegay in lagu keydiyo hubka kiimikada ee gudaha wadanka Suuriya.